Soomaalida Göteborg oo u baroordiiqeeysa weerarkii ka dhacay magaaladda Muqdisho | Somaliska
Weerarkii ka dhacay bartamaha magaaladda Muqdisho ee qasdigiisa ahaa in lugu gumaado shacabka soomaaliyeed. Waxeey falkani xanuun ku reebtay soomaalida guud ahaan kuwooda ku nool caalamka iyo dalkaan Iswiidhan. Maalinta sabtida ayaa waxaa lugu wadaa in bartamaha Göteborg ka dhaco banaanbax baroordiiq ah oo lugu mujiinayo sida falkan looga xun yahay islamarkaasina galaaftay nolosha dad gaaraya boqolaal gaaraya.
Banaanbaxan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey urrurka Neutrella Ungdom ee magaalada Göteborg. Urrurkan ayaa . ugu baaqaya soomaalida Göteborg ineey ka qeyb qaataan banaanbaxan kuna muujiyaan dareenkooda. Banaanbaxan ayaa waxaa uu dhacayaa maalinta sabtida ee ay taariikhdu tahay 21/10 saacada 14.00-16.00.
Dhinaca kale maalinta berito ah ayaa waxaa xarrunta Bluå Stället lugu qabanaya baroordiiq iyo duco loo sameeynayo dadkii ku waxyeeloobay weerarkii hoteel Safari ee ku yaalay wadada Soobe ee bartamaha magaaladda Muqdisho. Ugu dambeyntiina tan iyo markii uu dhacay weerarkii 14/10 waxaad mooda in si uun u mideeyey dareenka soomaalida.
Somaliska.com lacag miyaa laga dhigay?